Ayaa cuni doona khudradda shisheeyaha ee ugu horreeya? - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Ayaa cuni doona khudradda shisheeyaha ee ugu horreeya? - BGR
Shaqaalaha Saldhigga Caalamiga ah ee Xannaanada Caalamiga ah ayaa dhowaan soo gudbiyay kiis khamri ah. Dhalo iyo toban dhalo oo khamri casaan ah oo macaan Waxay ka soo safreen Dunida si ay jawiga u helaan waxayna ku arkeen sheybaarka orbiting halkaas oo lix saynisyahano ay tahay inay u ogolaadaan inay fadhiistaan ​​sanad ka hor intaadan dib u dirin. Iyagu ma cabi karaan, taas oo niyad jab ah, laakiin tijaabada ayaa ujeedadeedu tahay inay muujiso sida shucaaca xawaaraha iyo culeyska hooseeya u baddali karo qaabka iyo dhadhanka khamriga.
Waxay iga dhigtay inaan ka fikiro: Kumaa qofka ugu horreeya ee cuna cunn khudradda ka koray dusha adduun kale?
Bal qiyaas inaad tahay qofka ugu horreeya ee ogaada jiritaanka geedo dhir. Dukumiintiyadii ugu horreeyay ee ukun beedka waxay dib u dhacday qarniyo dhowr ah lamana oga in markii ugu horreysay lagu abuuray Afrika ama Hindiya, laakiin sidoo kale waxay u badan tahay inay sidaas tahay. Laakiin ka waran qofka ugu horeeya ee goostay inuu qaniino, ama khudradda duurjoogta ah?
Miyay arkeen, ma waxay u maleeyeen inay u muuqato mid macaan oo lagu dhex tuuray? Miyay fiirinayeen xooluhu markay cunayaan oo ma waxay u maleeyeen inay nabad tahay? Tuulo ka mid ah dadkii hore waxay u codeeyeen inay go’aansadaan cidda noqonaysa doofaarka Guinea? Waxaynu u badan nahay garan mayno lagana yaabo inayna garanaynin, laakiin markaan sahaminno nidaamkayaga qoraxda oo aan u dirno hawlgallo meeraysan Mars iyo laga yaabee in ka sii dambeeya, safarradan geesiyaasha ahi waxay u baahan doonaan cunto wayna macno samaynayaan inay sidaa sameeyaan. riix meesha, haddii ay suurtagal tahay.
Seynisyahanno ku xeel dheer dhulka ayaa tijaabinaya sida loo yaqaan 'analogues' ee ciidda Martian si ay u go'aamiyaan waxa halkaas ka socon kara. oo ay ku jiraan baradhada aad bayna noogu suurtagashay inaan ku beerinno dalag meel kale oo aan ahayn Dhulka. Waa wax xiiso leh, laakiin sida waayo-aragnimada khamriga, runtii garan mayno sida baradho Mars uga duwan tahay baradhada.
Dusha sare ee Mars ayaa lagu buufiyaa shucaac badan oo aan halkan wax uga qaban karno. Dhulka. Tan waxaa ka dhashay luminta jawiga jawiga badan iyo jawiga magnetic aad u daciifa. Haddii aan dhir ka dul beero dusha sare, xitaa gudaha qulqulka muraayadda kulul oo aan ku xakameyn karno doorsoomayaal badan, wax fikir ah kama hayno ficilcelinta suurtogalka ah ee geedka ama kala duwanaanshaha wax soo saarka. khudaarta ay soo saarto.
xitaa cilmi baaris la kafaala qaaday si hidde ahaan wax looga beddelo dhirta ka hor inta aan loo dirin meeraha casaanka, iyadoo la rajeynayo inay ka dhigto mid ka sii habboon shuruudaha ay ugu dambeyntii ku qasbi doonaan inay ku koraan. Cilmi baadhayaashu waxay rajaynayaan in ay tahay tallaabo horay loogu qaadayo dalagyada ku habboon meeraha Mars ee kori kara jiil ilaa fac.
Haddii aan mustaqbalka eegno - oo aan ka dhigno qaar gebi ahaanba fikradaha aan caddaaladda ahayn ee ku saabsan awooddeena aan ku ogaan karno ka dibna aan ugu safri karno dukaanno halka noloshu horeba ugu sii fiicnaaneysay - Arrinta cunnadu way sii adkaanaysaa. Mustaqbalka mala-awaalka ah halkaasoo himilada aadanaha ay ku degto adduun ajnabi ah oo durbaba ay ku nool yihiin dhir iyo xayawaan u gaar ah, maxaan cunnaa?
Mustaqbalka noocan oo kale ah wuxuu soo bandhigayaa horumar tikniyoolaji ah oo la yaab leh, oo laga yaabo inuu fiiro gaar ah u yeesho adeegsiga aaladda sixir-cabbir ee sixirku u digayo socotada meelaha fog fog ee halista geedka sunta ah. weligood ma arkin. Laakiin xitaa markaa, haddii sayniska kuu sheego in yaanyadaan buluuga ah ee qariibka ah gacantaada ku jiraan badbaado, diyaar ma u tahay inaad qaadatid qaniinyada ugu horreeya ee khudradda shisheeyaha runtii?
Isha Sawirka: Dhabarka: NASA / ESO / NAOJ
Saynisyahanadu waxay soo saareen birta diida inay quusto - BGR